Madaxweyne Farmaajo: Saaxiibkeyow mar i maqal. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Farmaajo: Saaxiibkeyow mar i maqal.
Fiiro Gaar ah Sawirka ninka geeska u xiga ee shaarka madow waa Maxamud Makis oo ka mid ahaan jirey qorayaasha Wargeyskii Xidigta Oktobar, waxaa ku xiga Madaxweyne Farmaajo,waxaa kusii xiga Amiin Caamir iyo Aniga.
Previous articleDadka loogu doon doonista badnaa caalamka Saadaam Xuseen, Madaxweynihii, Mucamar Qadaafi iyo Usaama bin Laadin.
Next articleAl-shabaab oo dhibaatada Muqdisho ku eedaysay Farmaajo, iyagoo sheegay in wixii kala dhaxeeyey ragga kala ee ka soo hor jeeda uu kaligiis la cararay.
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maanta saxiixay in gobolka Banaadir uu ku yeesho 13 kursi, kuraasta Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11aad,ayaa qoraalka uu saxiixay...
Duqa Muqdisho oo ka tacsiyeeyey geeridii ku timid Ugaas Xasan Ugaas...